Nagu saabsan - Ningbo Tingxuan Qalabka Korontada Co., Ltd.
Ningbo tinx Electrical Co., Ltd. waa soo saare xirfadle ah oo toosiya timaha, curiyaha timaha iyo burushyada toosinta timaha. Waxay ku taal Ningbo, oo ah magaalo deked furan oo leh gaadiid ku habboon. Sanadihii la soo dhaafay oo leh xoog farsamo xoog leh, wax soo saar tayo leh iyo bisayl leh, nidaam adeeg oo kaamil ah, ayaa lagu gaadhay horumar deg deg ah, tilmaamayaasha farsamo ee alaabteeda iyo saamaynta dhabta ah ee aqlabiyadda isticmaaleyaashu waxay si buuxda u xaqiijiyeen oo ay u dhan yihiin ammaan iyo helitaanka shahaadooyinka wax soo saarka tayada leh, waxay noqdeen shirkado caan ah oo ka tirsan warshadaha wax soo saarka timaha.
Ningbo waxay leedahay faa iidooyinka alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha iyo ku habboonaanta ganacsiga caalamiga ah. Sida magaaladan oo kale, Tinx Electrical waa mid da 'yar oo firfircoon. Iyada oo tiknoolajiyaddeeda casriga ah, waxay si joogto ah u soo saartay alaabooyin badan oo tayo sare leh si loo daboolo baahiyaha bulshada maanta iyo horumarinta baahiyaha macaamiisha si ay kaaga caawiyaan inaad furto adduun cusub oo xiiso leh oo leh fursado aan la koobi karayn.
Tinx Electrical waxay leedahay koox horumarineed naqshadaha wax soo saarka iyo horumarka in ka badan toban sano. Waxay u habeysaa alaabooyin kala duwan macaamiisha waxayna siisaa injineerada "hal-joogsi". Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale fulinnaa farsamaynta OEM / ODM iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Wax soo saarkayagu si ballaadhan ayaa loogu iibiyaa adduunka oo dhan. Wax soo saarkayagu waa noocyada ugu horreeya ee warshadaha.
Si loo daboolo baahida macaamiisha iyo maareynta gudaha, shirkadda Tinx Electrical waxay hirgelisay oo ay gudbisay ISO9001: nidaamka maaraynta tayada iyo ISO14001: nidaamka maareynta deegaanka. Isla mar ahaantaana, maadaama aan nahay alaab-qeybiyaha Philips, laga soo bilaabo 2011. Marka la eego ilaalinta deegaanka iyo badbaadada, Waxaa naga go'an inaan soo saarno alaab cagaaran oo deegaanka u habboon oo nabdoon. Waqtigan xaadirka ah, dhammaan alaabooyinkeennu waxay la kulmaan shuruudaha ROHS iyo CE.
Mustaqbalka, shirkaddu waxay sii wadi doontaa inay siiso ciyaar buuxda faa'iidooyinkeeda, had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa caqiidada "hoggaaminta sayniska iyo teknolojiyadda, u adeegidda suuqa, ula dhaqanida dadka si daacadnimo leh oo raadineysa kaamilnimo" iyo falsafadda shirkadaha ee "alaabtu waa dad ", waxay si isdaba joog ah u fulisaa hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, hal-abuurnimada qalabka, hal-abuurka adeegga iyo habka hal-abuurnimada maareynta, waxayna sii wadaan soo saaridda alaabooyin qiimo badan oo wax-ku-ool ah si loo daboolo baahiyaha horumarka mustaqbalka. Iyada oo loo adeegsanayo hal-abuurnimo si loo sii wado soo saarida alaab qiimo badan oo wax-ku-ool ah si loo daboolo baahiyaha horumarka mustaqbalka, si dhakhso leh macaamiisha loogu siiyo tayo sare, alaab qiimo jaban ayaa ah daba-galka hagar la’aanta ah ee yoolka.
Ku biir gacmaha Tinx si aad u abuurto mustaqbal wanaagsan ...
STSGZ2008263137 - RoHS 2.0 Shahaado